စုချစ်သူ: စတိဗ်၊ ဘီလ် နဲ့ ဘ၀ အကြောင်းတရားများ
Posted by စုချစ် at 10/06/2011 05:44:00 PM
ဂျော့ခ်ျ စတိဗ် မိန့်ခွန်းရော၊ သူ့အကြောင်းရော လွန်ခဲ့တဲ့ ၄-၅နှစ်လောက်က စင်္ကာပူသတင်းစာတစ်စောင်မှာ ဖတ်ဖူးတာ။ အဲဒီအချိန်က အိုင်ဖုန်းတွေ ဘာတွေတောင် မပေါ်သေးဘူး။ သူ့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ ရောဂါရှိရက်နဲ့ စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ဆက်လက်ကြိုးစားခဲ့ပုံကို အားကျ လေးစားလို့ မဆုံးဘူး။ ၅၆နှစ်ဆိုတာ ငယ်သေးတယ်။ လောကကို အများကြီး အကျိုးပြုနိူင်သေးတဲ့အချိန်မှာ မီးဇာကုန်ခဲ့ရတယ်။ နှမြောတယ်။
သူ့အကြောင်းအမှတ်တရ ထပ်ပြီး update လုပ်ပေးတာ ကျေးဇူး သူငယ်ချင်း။
Ma su chit thu
ွှThanks for your writhing. i am regular reader your blog. but it is difficult to write comment.
Tkx for comments , Sweet, Nyi Ag and Ah Ma Shwe Zin's blog....;)
Thkx so much for reading my post...:)
စတိဗ် ရဲ့ သွေးသားဖခင် ဆီးရီးယန်း အမေရိကန် ကြီး ပြောတာ ဖတ် မိ တော့.. ဘ၀ တွေ ရယ်..ဆန်းကြယ်..စိတ်နာ ဖွယ် လို့သာ တွေးမိတော့တယ်။ သူ က..တောက်လျှောက် စတိဗ် ကို တွေ့ခွင့် တောင်းခဲ့ပေမဲ့..သေတဲ့ အထိ အတွေ့ခံ မသွားဘူး တဲ့။
unwanted child တွေ က..ထူးပဲ ထူးခြားလေ သလား မသိ။ တကယ်တော့..သူတို့ ကို မလိုချင် ခဲ့တဲ့..သွေးသား ဆန္ဒ ကိုသာ ရှေ့တန်းတင် တဲ့.. မိဘ တွေ ရဲ့..အမှားတွေကို လက်စား ကောင်းကောင်း ချေပြသွားတာပဲ။
ဟုတ်တယ်...မကေရေ.... စတိဗ်က တစ်ခုခုကို နာကျည်းနေပုံတော့ ရတယ်။ သူ့အဖေရင်းကတော့ ပြောရှာသား... စတိဗ်ကိုယ်ဝန်ရှိတော့ သူက ယူမယ် လုပ်ပေမယ့် စတိဗ် အမေရဲ့ အဖေ (သူ့ အဖိုး) က လုံးဝသဘောမတူလို့ မယူခဲ့ရတာပါတဲ့။ နောက်ပိုင်း သူ့အဖေနဲ့ အမေ လက်ထပ်တော့ အဲဒီ သဘောမတူတဲ့ အဖိုး ကွယ်လွန်သွားတော့မှ လက်ထပ်ကြရတာ ဆိုပဲ။ အဲဒီက မွေးလာတဲ့ သူ့ညီမကိုတော့ ချစ်သားတဲ့။ သူ့ ညီမနဲ့ သူ့ အသက် ၃၀ကျော်မှာ ပထမဆုံး ဆုံခဲ့ကတဲက အဆက်အသွယ် မပြတ် ရှိကြတယ်တဲ့။
komyo lay said...
ဘီလ်​ဂိတ်​ ကွယ်​လွန်​သွားပီလား သိချင်​ပါတယ်